FAMPAHALALANA MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA PERSIANA PERSIANA - ALIKA
Fampahalalana momba ny fiompiana alika persiana persiana
Simba ilay Persian Mastiff (Sarabi Dog) tamin'ny herintaona
Ny Dog Sarabi Persiana dia goavambe misy taolana mavesatra ary lehibe tokoa molosser loha. Ny vavam-baravarana malalaka dia sady tsy lava no fohy loatra. Izy io dia somary kely kokoa noho ny volom-boankazo hafa, fa ny molotra ambony kosa mihantona. Ny maso dia miendrika amandy miloko mavo mavo. Mahitsy ny lamosina. Mavesatra ny tongony. Ny rambony matevina dia lava ary miendrika aritra. Ny alika persiana persiana matetika dia tonga amin'ny loko volontsôkôlà miaraka amin'ny sarontava mainty ary loko mainty matevina. Ny fotsy eo amin'ny tratra dia azo ekena. Ny palitao dia misy karazany roa, fohy sy salantsalany.
Ny Dog Sarabi Persia dia mpiambina biby fiompy sy fananana. Ity karazany ity dia iray amin'ireo alika matanjaka indrindra eran'izao tontolo izao, manana vatana goavambe, loha lehibe ary hery manaikitra mampatahotra. Tena tsy mivadika amin'ny tompony ary fanavakavahana amin'ny olon-tsy fantatra . izany mpiambina biby fiompy tena mahomby. Isaky ny misy bibidia manatona ny alika dia mody mailo miaraka amin'ny sofina mijoro, mandroroa miaraka amin'ny hodi-kazo mafy be hampandrenesana ny rehetra. Ny alika amin'ny ankapobeny dia misoroka ny fifanatrehana mivantana, fa rehefa miditra mpiditra an-tsokosoko manakaiky azy dia mandeha amin'ny fomba mampatahotra.
Hahavony: lahy: 32-35 santimetatra (81-89 cm) vehivavy: 28-32 santimetatra (71-81 cm)
Milanja: lahy: 143-198 pounds (65-90 kg) ny sasany mety hahatratra 100 kilao (100 kg)
Vehivavy: 110-154 pounds (50-70 kg) Ny sasany mety mavesatra
Karazana salama tena misy olana vitsivitsy. Ny sasany dia mora voan'ny tsiranoka amin'ny hip.
Ity karazana ity dia tsy tokony hatao amin'ny fiainana an-trano. Mila toerana izy ireo ary hanao tsara indrindra amin'ny tokontany malalaka farafaharatsiny. Ny Dog Sarabi Persiana dia afaka mizatra amin'ny toetrandro rehetra, manomboka amin'ny mari-pana ambany ka hatramin'ny hafanan'ny fahavaratra, amin'ny fialofana mety.
Ny Alika Sarabi Persiana dia tokony horaisina dia an-tongotra tsy tapaka isan'andro raha tsy alika miasa miasa manampy ny famoahana ny heriny ara-tsaina sy ara-batana. Voajanahary alika ny mandeha. Na dia eny am-pandehanana aza ny alika dia tsy maintsy atao amin'ny sisin-tongony na ao ambadik'ilay olona mitazona ny firaka, toy ny ao an-tsain'ny alika ny mpitarika no mitarika ny làlana, ary ny mpitondra dia tokony ho olombelona.
Ity karazana molosser ity dia afaka miaina 12 ka hatramin'ny 15 taona.
Ankizy 6 ka hatramin'ny 8 eo ho eo
Ity palitao goavambe goavambe ity dia misy karazany fohy sy salantsalany. Mila fanosotra tsindraindray izany. Izy io dia mpandatsa-javatra antonony.
Ny Persian Sarabi na Persian Mastiff dia mpiambina biby fiompy ary fiompiana alika mpiambina izay avy any avaratry Iran (Sarab Ardebil). Voalaza fa nivoatra avy tamin'ny alika asyrianina lehibe na alika mpiady tao Persia taloha.
Mastiff, mpiambina andiany
alika an-tendrombohitra Kaokazy efa lehibe
Volga ilay Persiana Sarabi Dog toy ny alika kely amin'ny 4 volana avy any Iran
Arraz the Persian Sarabi Dog as alika alika amin'ny 6 volana avy any Iran
Arraz the Persian Sarabi Dog as a puppy at 5 volana from Iran
Arraz the Persian Mastiff (Sarabi Dog) toy ny alika kely iray 1 volana avy any Iran— 'Arraz dia avy amin'ny fianakaviana mendrika aseho eto amin'ny iray volana izy ary lehilahy.'
Alika Sarabi Persiana any Iran— 'Ny alika persiana sarabi no alika tsara indrindra eran'izao tontolo izao.'
Alika Sarabi Persiana any Iran
whelping efajoro amin'ny faritra potty
amerikana pit bull terrier miloko fotsy
miteraka ambanin'ny 35 kilao ny alika
amerikana pitbull terrier vs amerikanina bully
alika toa retriever volamena kely
dachshund Chihuahua afangaro lava volo